Izingozi Zomkhumbi Wesikebhe | Izinkampani Zomthetho eDubai
Imikhumbi yokuhamba ngesikebhe ifana namadolobha amancane antanta phezu kwamanzi enabasebenzi bawo nabagibeli njengezakhamuzi ezakhiweni eziningi — izakhiwo ezakhiwe ngamakamelo ezindlu, izindawo zokungcebeleka nezindawo zokudlela. Kodwa, njenganoma yimuphi omunye umuzi, umkhumbi ohamba ngezikebhe ungabhekana nezingozi ezifanayo zokulimala, ezilula nezinkulu.
Ukuhamba Kwezinto Eziyingozi Ekuhambeni
ungabhekana kanjani necala
Yebo, izingozi zokuhamba ngomkhumbi zivame kakhulu futhi uma uhlushwa yodwa, kufanele wazi ukuthi ungabhekana kanjani necala ngendlela efanele.
Inkonzo ethe xaxa yotshwala
Amatshe akhuphuka odongeni
Abasebenzi bazishaya indiva izixwayiso zokwenziwa komzimba kanye nezicelo
Izingozi ze-elevator ne-escalator
Isifo seLegionnaire okuluhlobo lwesimo sezempilo esilethwe ngamagciwane asakazeka ngamabhubu ashisayo namachibi okubhukuda
Izinhlobo zezimangalo zokulimaza umkhumbi i-Cruise Ship
Kunezinhlobo ezahlukene zezimangalo zokulimala komkhumbi ezihamba ngesikebhe ezingabandakanya okulandelayo:
Uhambo futhi uwe noma ukugoqa futhi uwe
Izingozi zasemanzini noma zamachibi
Ukulimala komlilo kumkhumbi wokuhamba
Kulimale ukulondolozwa ngesikhathi sokuvakasha okugcwele olwandle
Igciwane le-Norwalk noma ukutheleleka kwe-Norovirus noma ezinye izinhlobo zezifo ezibangelwa yizimo ezingacocekile noma ukudla okungcolile
Kulimale ukulondolozwa ngesikhathi sokuzijabulisa okwenziwa onboard
Ukulimala ngenxa yamaphutha wokuhambahamba
Ukuwa kwengozi yento
Ukuhlukumeza ngokomzimba noma ngokocansi ngenxa yezakhiwo ezingaphephile noma ezingavikelekile
Ukunganakwa kwezokwelapha noma ukungasebenzi kahle kwezokwelapha
Ukulimala Kwe-Cruise Ship Fire
Imililo emikhunjini yokuhamba ngesikebhe kungadala ukulimala komuntu kanye nokuhlukumezeka kakhulu. Imililo yezinjini ingenza ukuthi ukuhamba komkhumbi kuhambe noma uhlu olungaholela esikebheni sithathe amanzi noma sicwile. Ukungasebenzi kahle kwenjini kungaholela kubagibeli abashiywe bangene phakathi kolwandle ekuhambeni komkhumbi olawulayo. Isikebhe futhi singalahlekelwa amandla ezimisweni zomoya nezokuhambisa indle. Amagciwane angathela ukudla uma amasistimu wokugcina ukudla nawo ethintekile.
Umlilo egumbini lezinjini ungaba yingozi enkulu kubo bobabili abakhweli kanye nabagibeli. Uma umkhumbi wokuhamba uphelelwa amandla, lokhu kungaholela ku:
Imililo yezinjini iyinkinga ekhathazayo futhi ingaholela ezingqinambeni ngohlelo olukhulu lwedizili olusebenzisa umkhumbi. Kubi njengoba izinjini eziguqula abahlinzeki zihlinzeka nogesi kuma-system kagesi ashibhile kufaka nogesi wokusebenzisa izinhlelo zezindlu zangasese.
Ukulimala Okuphinde Kubekhona Kwesimangalo Sengozi Yengozi Yesikebhe
Abaqhubi bezikebhe abahamba ngezinyawo nabanikazi bakweleta abagibeli ukunakekelwa. Umugqa wokuhamba ngezinyawo ubhekene nokwenza isiqiniseko sokuthi azikho izingozi ezingenangqondo ezikhona emkhunjini ezingenza abagibeli bahlaselwe ukulimala. Ukwehluleka ukufeza lezibopho nokufakazela ukuthi abasebenza noma umugqa wezinqola ubenganaki kungakuvumela ukuthi ufayele ukulimala okungatholakala esimweni sesicelo sengozi yomkhumbi. Ukunxephezelwa ongakuthola kufaka phakathi:
Izindleko zokuvuselela ezamanje nezesikhathi esizayo
Izindleko zokwelashwa zamanje nezesikhathi esizayo
Umholo wokuvinjelwa ongavinjelwe
Ukulahleka kwemali ekhokhelwa iholo elizayo kufakiwe
Izimangalo zokufa ngokungafanele
Ngabe Ummangali Wokufaka Isengozi Esinqobekile Angasebenza Kanjani?
Ngosizo lwabameli abakhethekile bezikebhe ezikhethekile zengozi yomkhumbi, ungaqiniseka ukuthi uzothola isinxephezelo esifanele nesifanelekile nganoma uluphi uhlobo lokulimala olusebenzise ngenkathi uhamba. Bangakuqondisa lapho uzulazula emanzini angajwayelekile wokugcwalisa icala ngokumelene nabanikazi bemikhumbi abasebenza budedengu.
Ukugcwalisa icala kubanikazi bemikhumbi abasebenza budedengu nabasebenza kuyo.